Yangu iPhone Screen Iri Kupenya. Heino Kugadzirisa! - Payette Pamberi - Iphone
chii chiri kutenderera denderedzwa pane yangu iphone
ford sync isingazive usb
yangu ipad wont simba on
apuro wachi yekutarisa yakanamatira pakutarisa kwekuvandudzwa
nei bluetooth yangu ichiramba ichibatidza
Yangu iPhone Screen Iri Kupenya. Heino Kugadzirisa!
Yako iPhone skrini mune glitching uye iwe hauzive nei. Inogona kudzimaira, kuita chando, kunonoka kana uchiibata, kana chimwewo chinhu chinoshungurudza. Muchikamu chino, Ini ndichatsanangura maitiro ekugadzirisa iyo iPhone skrini glitch !
Neyakaoma kumisazve yako iPhone, iwe unomanikidza kuti iite kamwe kamwe kudzima uye kudzoka. Dzimwe nguva kupunzika software kunogona kukonzera screen glitches, saka kutangazve yako iPhone kunogona kugadzirisa dambudziko.
Tsoka pazasi kuti zvakaoma itangezve yako iPhone:
iPhone 8 Uye Nyowani
Kutanga, pinda uye buritsa iyo vhoriyamu kumusoro bhatani . Wobva wadzvanya uye wasunungura iyo vhoriyamu pasi bhatani . Pakupedzisira, bata pasi bhatani repadivi kurudyi kwe iPhone yako kusvika iyo skrini yadzima uye iyo Apple logo inowanikwa.
Zve iPhone 7 uye 7 Plus
Panguva imwe chete dzvanya uye bata pasi iyo vhoriyamu pasi bhatani uye iyo bhatani remagetsi kusvikira iyo skrini yaenda nhema uye Apple logo inoonekwa.
iPhone SE, iPhone 6, & Pamberi
Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi uye iyo Bhatani repamba panguva imwechete kusvikira iyo skrini yadzima uye iyo Apple logo yaonekwa.
Isu tanzwa kubva kune vanhu vakati vakabudirira kugadzirisa iPhone screen glitches nekudzima Auto-Kupenya. Heano maitiro ekudzima Auto-Kupenya pane yako iPhone:
Tinya Ratidza & Saizi Yemavara .
Dzima switch iripedyo ne Kujeka-Kujeka .
Bvisa Nyaya Uye Pukuta Iyo Screen
iPhone inoratidzira inonzwisisika. Zvinokwanisika yako iPhone kesi kana chimwe chinhu pachiratidziro chiri kukonzera iyo yekubata skrini uye ichiita kuti ive glitch. Tora iPhone yako kunze kwayo uye pukuta ne microfiber jira kubvisa chero marara angave ari pachiratidziri.
nei foni yangu ichiramba ichindirova pamaapp
Icho App chiri Kukonzera Dambudziko?
Unoziva here kuti yako iPhone iri kungobhenekera chete kana iwe ukavhura chaiyo app? Kana zvakadaro, pane mukana wakanaka wekuti app irikukonzera kubwinya.
Pane zvinhu zvakati wandei zvaunogona kuita kuyedza kugadzirisa dambudziko, uye isu tichafamba iwe kuburikidza ese ari maviri matanho pazasi.
Vhara iro Dambudziko App
Kana iwe uchifunga kuti app iri kusashanda, chinhu chekutanga kuita kuivhara uye kuona kana dambudziko riripo.
Kana iwe uine iyo iPhone 8 kana yapfuura, tinya kaviri kabhatani Kumba apo yako iPhone yakavhurwa. Izvi zvinomutsa iyo switch switch, iyo inokuratidza maapplication ese avhurwa ikozvino pa iPhone yako. Tsvaga iyo app yaunoda kuvhara uye swipe iyo kumusoro uye kubva pamusoro pechiso.
Kune iPhones nyowani kupfuura iyo iPhone 8, swipe kumusoro kubva pasi pechidzitiro uye bata munwe wako pakati pechidzitiro kusvikira iyo switch switch ichivhura. Wadaro, Rova zvakasimba kumusoro pamusoro Anwendung kusvikira yanyangarika.
Delete Iyo Dambudziko App
Kana iyo app ikaramba ichikonzera matambudziko, iwe uchazoda kuidzima uye wotsvaga imwe nzira.
Kuti ubvise iyo iPhone app, zvinyoronyoro pfuurira uye bata pane iyo app kusvikira yatanga kutenderera. Wobva wadzvanya pane X mukona yekumusoro kuruboshwe rweiyo icon icon. Chiziviso chichaonekwa chichibvunza kana iwe uchida kudzima iyo app. Tinya Delete kusimbisa kuti iwe unoda kudzima iyo app pane yako iPhone.
Kana iwe usiri kunyatsoda kurasikirwa neapp iyi, unogona kuedza kuisazve iyo kuti uone kana kudzima iyo app kwakagadzirisa dambudziko. Kuti udzorezve iyo app, vhura iyo App Store uye tsvaga iyo app. Tinya bhatani rekurodha kurudyi rweapp kuti udzorezve.
Kana iyo purogiramu ikaramba ichipenya, iwe zvinosuruvarisa unofanira kugadzirisa imwe nzira.
A DFU kudzorera ndiyo yakadzika iPhone kudzoreredza. Usati waisa yako iPhone muDFU modhi, tinokurudzira zvikuru kuchengetedza backup nekuti DFU kudzoreredza inodzima uye kuisazve iyo yese kodhi pane yako iPhone. Isu tinotengesa iwe haudi kurasikirwa neaya ese ruzivo!
Mushure mokunge watsigira iPhone yako, tevera mutungamiri wedu kuti ungaita sei DFU kudzorera iPhone wako kana kutarisa